Xaaladda abaarta Spain waa mid laga naxo | Saadaasha Shabakadda
Maaddaama dadku maalinba maalinta ka dambeysa sii hadlayaan, abaarta ka jirta Spain waa mid aad u daran. Diiwaanka heerarka kaydka ayaa ka hooseeya celceliska iyo Weligood sidan ma ahan tan hoose ilaa 1990. Bilowga sannadkan biyo-biyoodka, biyaha kaydka ah ee kaydadka ayaa si dhib yar isu beddelay toddobaadyadii la soo dhaafay, in kasta oo roobabkii da'een.
Xaalad intee le'eg ayaan ku jirnaa?
Heerka biyaha ku ururay haamaha biyaha isma bedelin muddo dheer, in kasta oo roobabkii da’ayeen. Si kale haddii loo dhigo, waxa yar ee roobabku daaqaan maalmo gudahood. Wadarta mugga la xayiray ayaa kaliya ku kordhay 0,1%, taas oo ah wax dhib ah marka loo eego wadarta guud ee usbuucii hore (36,5%). Xogtaan waxaa lagu soo uruuriyay tirakoobka Wasaaradda Deegaanka.
Caadi ahaan, kaydadka biyaha ayaa si joogto ah u yaraanaya. Tani waa markii ugu horreysay tan iyo bishii May ee aan biyuhu hoos u dhicin. Laakiin tani ma muujineyso horumar, maadaama ay caadi ahaan laheyd inay kordho.
Sidaa darteed, heerka biyaha oo is uruuray wuxuu taagan yahay 20.475 hektar cube (hm3) iyadoo lagu kordhiyay 29 hektar hektar toddobaad gudihiis oo roobabku ay saameyn ku yeesheen meelihii dhaadheer ee Atlantic, iyadoo ugu badnaan laga helay Santiago de Compostela, halkaasoo laga soo ururiyay 140 litir halkii mitirkiiba.
Dooxooyinka leh xaalad aad u badan oo aan fiicnayn, oo gaadha xaddidooda waa tan Segura, oo ah 13,7%, iyo Júcar oo ah 25%. Labaduba waxay diiwaangeliyeen koror yar toddobaadkan. Laakiin haddii xaaladdu sidan ku sii socoto, waxaa lagu baabbi'in doonaa maalmo yar gudahood.
Si aad fikrad uga hesho biyaha ku go'doonsan Isbaanishka, halkan waxaa ku yaal jadwal halkaasoo laga soo ururinayo awoodda guud ee hektar hektar cubic, awoodda hadda jirta iyo boqolkiiba inta ay biyo xireen yihiin, iyadoo lagu aruurinayo saxannada biyo-mareenka:
Xaaladda Spain waa mid aad looga naxo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Xaaladda abaaraha ee Spain waa mid laga naxo